Kicinta ficil-celinta kaydka ah > Vielhuber David
Kicinta ficil-celinta kaydka ah01
Qeybinta dhinaca adeegga ayaa hadda qeyb ka ah jaangooyada caadiga ah ee bogagga internetka iyo barnaamijyada. Browsers sida Google Chrome sidoo kale waxay u muuqdaan inay keydiyaan intii suurtagal ah si loo yareeyo waqtiyada rarka ee wicitaanada dheeraadka ah. Wax kama jiraan The kayd ah CSS / files JS / image loo kartaa xalliyo iyadoo la kaashanayo mod_pagespeed , dhacaaya / kayd gacanta madax, a kayd cad ama aad u pragmatically oo si toos ah iyada oo xuduudaheedu shaqsi ka dib markii magaca faylka.
Waxaa jira xeelado kala duwan oo ah goorta feylasha dib loo rakibayo iyo in kale.
Kala duwanaanta ugu fudud ayaa dib loogu soo celinayaa codsi kasta. Si tan loo sameeyo, waxaad si fudud ugu lifaaqeysaa xarig aan kala sooc lahayn feylka si aad ugu dhexjirto oo markaa aad u qasabto dib-u-dejin (halkan adigoo isticmaalaya feyl sawir ahaan):
Haddii taasi ay tahay wax aad u badan oo beddelkeed oo kaliya ay rabto in dib loo buuxiyo markii faylka la beddelay, taariikhda feylkii ugu dambeeyay la beddelay ayaa la isticmaalaa (halkan iyadoo la adeegsanayo tusaalaha faylka JS):
Haddii aad isticmaasho maareynta nooca sida Git , waxaad sidoo kale isticmaali kartaa haashka gaarka ah ee ballanqaadkii ugu dambeeyay (nooca la soo gaabiyey ayaa kugu filan) (halkan adoo adeegsanaya faylka CSS tusaale ahaan):
WordPress wuxuu ku dhejinayaa nooca WordPress ee hadda jira dhammaan faylasha lagu dhex daray enqueue_style iyo enqueue_script ahaan. Waad beddeli kartaa habdhaqankan tooska ah ee wicitaannada dood ahaan, ama waad isku xidhi kartaa adduunka oo isticmaali kartaa mid ka mid ah hababka kor ku xusan: